ချစ်ရမှာ ကြောက်နေသူတွေ ဒီကမ္ဘာမှာ တကယ်ရှိတယ်
လူတော်တော်များများအတွက် ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့အရာပါပဲ၊ အရမ်းကြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုဘဲ နေ့စဉ်အသက်ရှုနေသလို၊ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေ ပြုလုပ်နေသလိုကို သဘာဝကျကျ ပြုလုပ်နေကြတဲ့အရာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့်ပေ့ါလေ…တချို့တချို့တွေ အတွက်ကျတော့ ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်၊ သူတို့အတွက်ကတော့ ရည်းစားထားရတယ်ဆိုတာ ဘဝအတွက် အခက်အခဲတစ်ခုခုကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရသလိုပါပဲ၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ သောကတွေ၊ ဗျာပါဒပွေလို့။ ဒီလို ဖြစ်နေတာမျိုး ခံစားရပြီဆိုရင် ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ အရင်မှတ်ပါနော်။ ဒီလိုမျိုးကို “Commitment Phobia” မြန်မာလို နားလည်လွယ်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ချည်နှောင်ရမှာ၊ ချည်နှောင်ခံရမှာ ကြောက်ခြင်းပါပဲ။
ရည်းစားဖြစ်လာပြီဆိုရင် အပြန်အလှန်ကတိကဝတ်တွေထားတာ၊ ချည်နှောင်မှုလေးတွေရှိလာတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေအတွက်မှာတော့ ဒါကိုပဲ ကြောက်စရာလန့်စရာထင်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက ချစ်ရမှာ ကြောက်တာ၊ အရမ်းချစ်သွားမှာ ကြောက်တာ၊ ရည်းစားဖြစ်ပြီးမှ ပြတ်သွားမှာ ကြောက်တာ၊ နောက်ဆုံး သူတို့ကို ချည်နှောင်လာမှာ ကြောက်တာတွေလည်း ပါပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာမျိုးဟာ လူတိုင်း ကျားမ မရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်တတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ Dating လုပ်ပုံနဲ့ ရည်းစားထားပုံတွေဟာလည်း သူများနဲ့ မတူ ခြားနားတတ်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့ ရည်းစားထားပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အလေးအနက်ဖြစ်မလာခင် ဖြတ်လိုက်တာမျိုး၊ တစ်လထက်ပိုပြီး မတွဲနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပိုနီးကပ်လာလေ၊ ပိုကြောက်လာလေဖြစ်ပြီး ရှောင်ဖယ်ထွက်ပြေးချင်လာတာမျိုးပေ့ါ။
ဘာလို့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ရလဲ
ဒီလို ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ကြောက်ရလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ကို ကြောက်တယ်လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာအောင် စေ့ဆော်ပေးတဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကတော့…
ရည်းစားထားပြီးမှ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ပြတ်သွားမှာစိုးတာ
ရည်းစားထားပြီးမှ တငိုငိုတရယ်ရယ်ဖြစ်နေရမှာစိုးတာ (ဥပမာ ပစ်ထားခံရတာတို့၊ ဖောက်ပြန်သစ္စာမဲ့ခံရမှာ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရမှာတို့ ကြုံရတာကြောင့်ပေါ့)
အရင်အတိတ်က ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေကြောင့် နာကျင်စရာအတိတ်တွေရှိခဲ့ဖူးတာကြောင့်
ကလေးဘဝက စိတ်ဒဏ်ရာတွေ၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရဖူးတာတွေကြောင့်
ကလေးတုန်းတည်းက မပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ၊ မကြင်နာဂရုစိုက်မခံရတာတွေကြောင့်
အဆင်မပြေတဲ့၊ ပြဿနာတွေရှိတဲ့ မိသားစုကြား ကြီးပြင်းလာရတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို ချစ်မိရင်တော့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားရပါမယ်၊ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ ပူပန်မှုတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ပေးတာ၊ ဂရုစိုက်ပေးတာ၊ အမြဲသတိထားဆက်ဆံပေးတာမျိုးလုပ်ပေးမှ တော်ကာကျတာပါ။ နောက်ထပ် သတိချပ်ရမှာကတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ခုခေတ်စားနေတဲ့ Silent လို့ခေါ်တဲ့ သူနဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ်နဲ့ သူနှစ်ယောက်တည်း သိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မသိစေချင်တဲ့ ချစ်သူဘဝမျိုးကို ဦးတည်သွားတတ်တယ်ဆိုတာပါ။
ဒီတော့ ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူဟာ ဒီလို လူမျိုး ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ
၁။ သူတို့ရဲ့ အရင်ကချစ်သူရည်းစားဘဝတွေဟာ အရမ်းအချိန်တိုလွန်းခဲ့တာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပြတ်စဲသွားရတဲ့လူမျိုးတွေ
အရင်က ခံထားရဖူးတော့ တစ်ခါသေဖူး၊ ပျဉ်ဖိုးရော လက်သမားခပါ နားလည်သွားတဲ့အမျိုးအစားတွေပါ။ ရေရှည်ရည်းစားထားဖို့ မစဉ်းစားတော့သလို၊ သူတို့ကို လေးလေးနက်နက်ချည်နှောင်မယ်ကြံတိုင်း ထွက်ပြေးတတ်တဲ့လူတွေပေ့ါ။
၂။ Date လုပ်ချိန်းတွေ့ဖို့ ဘယ်တော့မှ ကတိမပေးတတ်ဘူး
ရုတ်တရက်စိတ်ပါရင် ထွက်လာတွေ့နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ကို အချိန်ပေးပြီး သီးသန့်ချိန်းတွေ့တာမျိုးတွေ သူတို့က မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ချိန်းပြန်ရင်လည်း “လာခဲ့မယ်လေ” ဆိုတာထက် “ကြည့်သေးတာပေါ့”လို့ ပြန်ပြောတတ်သူတွေ
၃။ မရေရာ မသေချာတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေပဲ သုံးတတ်တဲ့သူတွေ
Commitment Phobia ရှိမရှိ သူတို့ ပြောတဲ့ စကားတွေ နားထောင်ရင်ကို လွယ်ပါတယ်၊ “ဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပေ့ါ” “မသိဘူးလေ” “ဘယ်ပြောတတ်မလဲ” ဆိုတာတွေ တသီကြီးသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်ကနေ အိမ်ကို ၅နာရီ ပုံမှန်ပြန်ရောက်တတ်ရင်တောင် “ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲမသိဘူးလေ၊ ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်” လို့ပဲ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ဖြေတတ်သူတွေပါ။
၄။ သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စကို လျှို့ဝှက်ထားချင်ကြတယ်
တကယ်လို့ ခင်ဗျားက သူတို့လို လူမျိုးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ လူကြားထဲ ရည်းစားတွေလို သိသိသာသာနေထိုင်ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က သူ့ရဲ့ ရည်းစားလား၊ ဘာလား ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတောင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၅။ “ချစ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အကြောက်အကန်ရှောင်ပါတယ်
ဒီလို “Commitment Phobia” ရှိတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို ထုတ်ပြဖို့ တွန့်ကြပါတယ်။ တချို့ဆို ဖော်ပြဖို့ တွန့်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ အဲဒီလို ခံစားချက်တွေ ရှိမှာကိုပါ ကြောက်ကြတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့ဆီက ချစ်တယ်ဆိုတာ ကြားရဖို့က ထီပေါက်သလောက်ကို ခက်ဖို့ ရှိတယ်။ ဒါငါ့ဘဲ၊ ငါ့စော်လို့ ပြောတာတွေလည်း မကြိုက်ကြဘူး။ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ဖို့ မပြောနဲ့၊ သူများပြောလာရင်တောင် အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ဆင်ခြေတွေပေးပြီး ငြင်းမယ့်သူတွေပါ။
၆။ သူတို့မှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းလို့ ရတဲ့ သူငယ်ချင်းအများကြီးရှိမနေတတ်ဘူး
ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက သူတို့မှာ သူငယ်ချင်းအများကြီး မရှိတာပါ၊ လူအတော်များများနဲ့ သိပေမယ့် ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းပေါင်းစုံကို ရင်ဖွင့်ရမယ့်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း Psycho ဖောက်နေတတ်တယ်။
၇။ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ သူမျိုးတွေ
သူတို့နဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် သူတို့ရဲ့ ဒီနေ့စိတ်ခံစားချက်က ဘယ်လိုဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ချိုချိုသာသာနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပေမယ့် နောက်နေ့ကျ ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေမှာပါ။ ဒီတော့ အမြဲအံ့သြအောင်လုပ်မယ့်သူမျိုးတွေပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုလူမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ချစ်သူက ဒီလိုလူမျိုး ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါဦး။
ပစ္စုပ္ပန်ကို အာရုံစိုက်ပါ၊ အရှည်ကြီး၊ အဝေးကြီးတွေ မစဉ်းစားဘဲ လက်ရှိအချိန်နဲ့ ကိုယ့်ရှေ့က လူကိုပဲ အရေးစိုက်ကြည့်ပါ၊ အခုကစ ဘာတွေ ကောင်းအောင် လုပ်လို့ ရမလဲဆိုတာပေ့ါ။
ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာကို သိမှတ်လက်ခံပါ။
ကိုယ့်မိဘကြောင့် ဖြစ်နေရတာဆိုရင်လည်း သူတို့နဲ့ မတူအောင် နေပြီး ပြဿနာကို အဖြေရှာလို့ရပါတယ်။
တရားထိုင်ပါ၊ စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။
ဒီကမ္ဘာမှာ ချစ်ရမှာကို ကြောက်နေတဲ့သူတွေရော၊ အဲဒီလို ကြောက်နေတဲ့သူတွေကို ချစ်မိတဲ့သူတွေရော လွယ်တာတွေ မခက်ဘဲ အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…
by redrose .3hours ago
by redrose .5hours ago
by redrose .6hours ago